डायबिटिजका बिरामीले फलफूल खाने कि नखाने ?
एजेन्सी– कसैलाई मधुमेह वा डायबेटिज छ भने त्यसले जीवनभर समस्यामा पार्न सक्छ । एकपटक मधुमेह भयो भने यसलाई कन्ट्रोल त गर्न सकिन्छ तर पूरै तरिकाले यसलाई निर्मूल नै चाहिँ पार्न समस्या नै पर्छ । जे होस्, डायबिटिजलाई नियन्त्रणमा लिन शरीरमा चिनीको मात्रा सकेसम्म मिलाउनु पर्छ । र, यसलाई नियन्त्रणमा लिन हामीले खानामा कन्ट्रोल गर्नुपर्छ ।
तर, मधुमेहको समस्या के होइन भने हामीले कुनै एउटा खान पूर्ण रुपमा बन्द नै गर्नुपर्छ । हामीले ध्यान दिनु पर्ने कुरा के हो भने बढी चिनी भएका खानेकुरा वा काइब्रोहाइड्रेट चाहिँ खानु हुँदैन । बरु फाइबरयुक्त खानेकुरालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । तर, काब्रोहाइड्रेट भएका खानेकुरा छोड्नै पर्छ भन्ने होइन । जस्तै, आलु खान मन हुनेहरुले आलु खाँदा त हुन्छ तर त्यसलाई मज्जाले सलादहरुसँग खानुपर्छ ।
तर, कहिलेकांही सोधिन्छ– मधुमेहको समस्या भएका व्यक्तिहरु फलफूल खान त सक्छन् । तर, के उनीहरुले फलफूलको जुस पनि पिउनुहुन्छ ? यसको सरल जवाफ हो– हुँदैन । फलफलूलको जुसमा चिनीमात्र हुने भएकाले पनि यस्तो गर्नु हुँदैन । सुगर ब्यालेन्स गर्न त्यसमा फाइबर केही पनि हुँदैन । त्यसैले पनि मधुमेह भएका व्यक्तिहरुले जुस भन्दा फलफूलमा नै बढी जोड दिनुपर्छ ।